पुस्तक अंश : ऊ असुरक्षा मान्छे - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← हास्य-व्यङ्ग्य कथा : त्यो किताब
पुस्तक अंश : यत्रैसित्ती ! →
पुस्तक अंश : ऊ असुरक्षा मान्छे
– जे भए पनि सबै कुरा भगवानले सुरक्षा गर्देलान् नि !’ सोची ।
– ती त नपुंसक हुन् ।’
– तेत्तीसकोटी कहाँबाट जन्मे त ?’
– तो त उहिलेको कुरा ।’
अठार वर्ष पूरा भएर उन्नाईस पनि लागी, छयालीस सालले । आइमाईको बैंस हलक्क बढ्छ । हलक्क बढ्ने उमेर सकियो अब । घरै नभए पनि बेला भएपछि घर हुनेहरुको सँगसँगै घर नहुनेहरुको पनि बैंस आउँदो रहेछ । यही हो बैंसको उत्कर्ष । अब यो बैंस यहाँभन्दा मस्त हुँदैन । घट्छ । लाटो बैंस एकदम आँधो हुँदो रहेछ । एकोहोरो ।
घर नभएकी ऊ रातसाँझ त्यही बन्दजस्तो धोतीको भित्ताभित्र हुन्थी । उसलाई सुरक्षा गर्ने कुनै झ्याल थिएन । ढोका थिएन । घर थिएन । अभिभावक थिएन । गरे पनि नगरे पनि त्यही फाटेको धोतीको भित्ताले हो । त्यही थियो ऊसँग ।
भगवान्ले पनि सुरक्षा गर्न सक्ता रहेनछन् । उसले आफ्ना साथीहरुको असुरक्षा सम्झी । धेरै पटक आफ्नै आँखाले राति वागेश्वरी पार्कमा थुप्रै रासलीला देखी । पछि आएर आˆनो सुरक्षा भगवानले गरेका रहेनछन् भन्ने भयो उसलाई । फाटेको धोतीको भित्तामाथि पनि शङ्का लाग्यो । होइन रहेछ फाटेको धोतीले पनि सुरक्षा दिएको । लाखलाख धन्यवाद दिई उसले आफ्नो कुरुपतालाई । किनभने सबैभन्दा बढी सुरक्षा कुरुपताले गरेको रहेछ ।
निश्चिन्त भई । प्रश्न गरी आफ्नै अगाडिको शून्यतालाई- ‘कसले छुन्छ मलाई ? कसले समाउँछ मलाई ? कसले म्वाइँ खान्छ मलाई ? कसले सम्भोग गर्छ मलाई ? कुरुपताले यी सबै कुराबाट सुरक्षित गर्दो रहेछ । सबैभन्दा बढी पवित्रता, सबैभन्दा बढी कुमारित्व त कुरुपतामा हुने रहेछ ।’ सम्झिएर आफूलाई, आफ्नै कुरुपतालाई म्वाइँ खाई ।
कति पुरूषहरु उसको नजिकै आएर टाढिएको सम्झी । हेर्न खोजेर नहेरेको, छुन खोजेर नछोएको सम्झिएर ऊ आफूलाई सुरक्षित महसुस गरी र आनन्दित भई ।
सोची- देखेपछि उसलाई, हेर्न खोज्नेहरुको चिसिएला एक्कासि उम्लिरहेको पानी । बाफ भएका भए एक्कासि पानी बन्लान् । ओठसँग चित्त बुझाउन चाहनेहरु पिर्लिक्क परेका फोहोर तलाउजस्ता आँखा देखेपछि तर्सेलान् । आँखासँग चित्त बुझाउन खोज्नेहरु सुनिएजस्ता नमिलेका ठूलठूला ओठहरु देखेपछि टाढिएलान् । पूरै अनुहार अनि अनुहार धानेर उभिएको कुरुपता देखेपछि प्रत्येक पुरूषहरु अपुरूष भएर फर्केलान् । फर्किरहेछन् ।
जस्तो बाआमा, दाजुभाइ, लोग्ने, प्रेमी, प्रशासन, सेना, भगवान कसैले गर्न नसकेको सुरक्षा कुरुपताले नै गर्दो रहेछ एउटी कुरुप युवतीलाई ।
फेरि उसले आफ्नो कुरुपतालाई माया गरी । र नाम दिँदै बरबराई, धन्य कुरुपेश्वरी भगवती ! तिम्रै सुरक्षाले बाँचिरहेछु ।’
-’सुरक्षा चाहने युवतीहरु यसरी सुरक्षा दिने कुरुपतालाई किन यति धेरै घृणा गर्छन् ? किन प्रेम गर्न सक्तैनन् असुन्दरतालाई ? किन जस्तोसुकै अप्ठ्यारो पनि सहन तयार हुन्छन् राम्री देखिनका लागि आइमाईहरु ?’ उसले फेरि आफ्नो कुरुपतालाई म्वाइँ खाई ।
तर किन सन्तुष्टि मिलेन म्वाइँबाट ? उसलाई यतिन्जेल सुनिरहेका कुराहरु सुन्दासुन्दै अनायास दिक्क लाग्यो । यतिन्जेल सोचिरहेका कुराहरु सोच्तासोच्तै सोचाइसँग नै वाक्क लाग्यो । कताकता मनभित्रबाट एउटा ज्वार विस्फोट हुन खोजेजस्तो, एउटा असन्तुष्टि छताछुल्ल पोखिन लागेजस्तो भयो ।
सधैं देखिरहेकै हो तर एक दिन मनभित्रैबाट देखी- वागेश्वरीको पार्क प्रेममय भएको । चराहरुले जस्तै केही युवायुवतीका प्रेममय जोडीहरु प्रेमलीला गरिहेका । उनीहरु बगैंचाका फूलहरुजस्तै सुहाएका थिए उसका आँखामा । तिनै जोडीहरु, कोही हात समाएर, कोही अँगालोमा बाँधिएर मन्दिरतिर आए । सँगैसँगै घुमेर मन्दिर, देवीको मूर्तिअगाडि उभिएर कुन्नि केके मागे । एकअर्कालाई टीका लगाइदिए, प्रसाद दिए, ध्वजा लगाइदिए । कताकता ऊभित्र तृष्णा बढेर आयो । उम्लिएर आयो ।
सधैं लाग्ने निद्रा लागेन अचानक । सधैं आउने निद्रा कहाँ गयो ? किन बिर्सियो ? किन घात गर्‍यो निद्राले ? तर, सोचेर हेर्दा उसलाई त्यो अनिद्रा नै प्यारो लाग्यो । ननिदाएरै रात रोएको हेर्ने मन भयो ।
ती प्रेमलीला गर्नेहरुले उसको मनमा फूलको थुँगा नहानेको भए ऊ निदाउने थिई कि ? भित्रको छटपटी ब्यूँझने थिएन कि ? एउटा मीठो निद्रा र मीठो सपनाको सृजनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन कि ? भित्र आगो सल्किन थाल्यो । बल्न थाल्यो । दन्किन थाल्यो । आफैभित्रको आगोले जलाएर खरानी बनाओस् र आनन्दित बनाओस् बरू भन्ने पनि सोची ।
तिनै प्रेमालाप गर्नेहरु नै हुन्, जसले उसको बैंसमा सलाई कोरेर गए । आगो पारेर जानेलाई सोचेर तिनलाई धन्यवाद दिई । कमसेकम एउटा छटपटी, उकुसमुकुस र बेचैनीको ज्वालामुखी त फुट्यो । आरनमा तताइएको फलामलाई पानीमा डुबाएपछि फलाम शान्त हुन्छ । तर, तलाउमा जति डुबे पनि ऊभित्र सल्किएको आगो झ्वाइँ…अँ भएन । अचानक उसलाई असुरक्षित हुन मन लाग्यो ।
आफ्नो कुरुपताले दिएको सुरक्षा उसलाई बोझ भयो । सुरक्षितै नहुने कुरा मान्छे सुरक्षित गर्न खोजिरहेछ सुरक्षाको भ्रम बोकेर ?
सुरक्षामा भन्दा असुरक्षामा कत्रो आनन्द लुकेको हुँदो रहेछ Û सुन्दरी हुनु कति आनन्दको कुरा । किनभने, सुन्दरी हुनु भनेको असुरक्षित हुनु हो । बहुमूल्य गहनाहरुले सजिनु कति आनन्दको कुरा । किनभने, गहना लगाउनु भनेको असुरक्षित हुनु हो । अर्धनग्न लुगामा विभिन्न फेसन गरेर दुनियाँका अगाडि आफूलाई प्रदर्शित गर्नु कति आनन्दको कुरा । किनभने, अर्धनग्न हुनु भनेको असुरक्षित हुनु हो ।
उसलाई पनि असुरक्षित आनन्द लिने मन भयो । असुरक्षामा आनन्द लिने मन, तर उसलाई उसकै कुरुपताले सुरक्षा गरिरहृयो । ऊसँग कहिल्यै नछुट्टिने कुरुपतालाई आफूबाट मात्र एक दिनका लागि अलग गरेर भए पनि उसलाई असुरक्षित हुने मन भयो ।
के सबै युवतीहरु प्रेमिका हुन लायक हुँदैनन् ? उसलाई कसैको प्रेमिका हुन मन लाग्यो । के सबै स्वास्नी मान्छेहरु स्वास्नी हुन लायक हुँदैनन् ? उसलाई कसैकी स्वास्नी बन्न मन लाग्यो ।
उसलाई लोग्नेको न्यानो ओडेर सुत्न मन लाग्यो । बजारमा बेच्न राखिएका त्यतिका सिन्दूरका रासहरु कतै बतासले उडाएर उसको सिउँदोमा ल्याएर छरोस् र सिउँदो भरिपूर्ण बनाओस् । कतैबाट पराग उडाएर ल्याओस् बतासले र छरिदिओस् उसको गर्भासशयको मुखमा, फूलमा भमराका खुट्टाले झैँ ।
एकपटक आएको थियो एउटा लेठेब्रो । दिउँसो मात्र बात मारेर गयो । त्यसैलाई भए पनि लोग्ने बनाउँछु भन्ने थियो उसलाई । दिनभरि कुरा गरेर गएको मान्छे साँझ आउँछु भनेर आएन । कुनै साँझ पनि आएन । राति आएन । कुनै राति पनि आएन । दिनमा पनि त्यही एक दिन हो । त्यसपछि नजिकिन कुनै लेठेब्राहरु पनि आएनन् । उसलाई ग्लानि भयो ।
एकाएक उसको मनमा सुन्दरी आइमाईहरुप्रति ईष्र्या र घृणा सँगसँगै पलायो । तिनीहरुको सौन्दर्य एक दिनका लागि सापटी मागेर यही मन्दिरमा बाटो कुरेर बस्न मन लाग्यो । किनभने, सुन्दरी आइमाईहरु मात्र वेश्या हुन लायक हुँदा रहेछन् । कुरुप आइमाईहरु वेश्या हुन पनि लायक हुँदा रहेनछन् ।
समाजमा आदर्श बोकेर बाँचेका पुरूषहरुले आइमाईमा खोज्ने पवित्रता कुरुप आइमाईहरुमै पाउँछन् । तर ती आँखा फुटेका पुरूषहरु असुन्दरीहरुलाई घृणा गरेर किन सुन्दरीहरुकै चाकडी गर्छन् ? दास हुन्छन् ?
प्रत्येक पुरूषहरु सद्दे आइमाई खोज्दै हिँड्छन् । तर कुरुप आइमाईलाई कहिल्यै सद्दे देख्तैनन् । उनीहरु सुन्दरीहरुलाई सद्दे देख्छन् । कुमारी देख्छन् । गङ्गा देख्छन् । दुनियाँले उसको सौन्दर्यमा पौडी खेलेको देख्तैनन् ।
सद्दे आइमाई खोज्दै हिँड्ने लोग्ने मान्छेहरु किन सुन्दरीलाई मात्र सद्दे देख्छन् ? जसले पुरूषको स्पर्शसम्म पाएकी हुन्न उसलाई किन ँभालु’ देख्छन् ? उसले आफ्नै कानले छाडा केटाहरुको मुखबाट आफूलाई ँभालु’ भनेर घृणाले मुख फालेको धेरै देखेकी र सुनेकी छ । प्रत्येक सुन्दरीहरुलाई एकाएक घृणा गर्दै, पुरूषहरुलाई सराप्तै निकै बेरसम्म बरबराई ।
धेरै बेर बरबराएपछि थाकेझैँ शान्त भएर सोची- मधेसको बाटो त सीधा, फराकिलो र पूर्ण होला भनेको उस्तै घुमाउरो, उकालो, ओरालो, खाल्टाखुल्टी, मैलो पानी जमेको, अपूर्ण हिँड्दाहिँड्दै कति ठाउँमा बाटो आफै हराएको पो रहेछ ।
कात्तिके सङ्क्रान्तिको पहिलो रात । गर्मी सकिइसकेकाले चिसो सुरू भइसकेको थियो । तर उसलाई हपहपी भएको थियो छटपटी, उद्विग्नता । उसलाई आˆनै शरीर निचोर्न मन लाग्यो कागती निचोरेझैँ । पेल्न मन लाग्यो, उखु पेलेझैँ कोलमा र लोग्ने मान्छेको जातलाई पिलाउन मन लाग्यो । घटघटी पिओस् ठाडो घाँटी लाएर । र तृप्त होस् । उसलाई पनि तृप्त बनाओस् ।
बरू बलत्कारै होस् । एकपटक मौका मिलाएर उसलाई बलात्कृत हुन मन लाग्यो । लगाएको एकसरो धोती फुकाली, सुतेको ठाउँबाट उठेर मध्यरात चिर्दै । पेटिकोट थिएन । ब्लाउज फुकाली र निर्वस्त्र बनाई होइन, भएकैलाई देखाई । र, भित्ता पनि तोडेर फाटेको धोतीको, निसङ्कोच पल्टी ।
आकाशमा जून आधा थियो- देख्यो । ताराहरुले देखे । तलाउले देख्यो । तलाउको माझमा उभिएको जुँगे महादेवले देख्यो । देखिरहृयो । तलाउवरिपरिका फूलहरुले देखे । रुखहरुले देखे । नजिकै दुई कुकुर र एक कुकुर्नी रहेछन् । तिनले देखे । देख्नेहरु कसैले उसलाई केही गरेनन् ।
मात्र उसको नग्नता हेर्ने त्यहाँ कुनै मर्द थिएन । भएको भए पनि नपुंसक हुन्थ्यो कि ? अरु त केही लागेन, तलाउको माझमा उभिएको जुँगे महादेव भने सबैभन्दा बढी नपुंसक लाग्यो उसलाई । नामर्द लाग्यो । नग्नता पनि चुपचाप हेर्ने नपंुसक त हुन्छ नि- बिस्तारै बोलेर आफैलाई सुनाई । सुन्न त कुकुरहरुले पनि सुने होलान् Û के बुझ्थे ?
कोही लोग्ने मान्छे आओस् तर नग्नता ढाक्ने छैन- सोचेर पल्टी । बलत्कारै गरोस्, चिच्याउने छैन । बदलामा उसले पुण्य पाउनेछ । बरू एउटा बतासे सन्तान जन्मोस् । ऊ आफू हुर्किएझैँ यही वागेश्वरीको आँगनमा हुर्किएला । तर, त्यस्तो कोही मर्द त्यो मध्यरातलाई चिर्न उसका सामु प्रकट भएन ।
गगनगन्जमा बदिनीहरुको धन्दा नरोकिएको भए बरू बदिनी भएर त्यतै जानुहुन्थ्यो । तर, बदिनी भएर बस्ता पनि आँखामा फुलो परेका लोग्ने मान्छेहरु राम्री बदिनी खोज्दै हिँड्लान् । नराम्री भए पनि एउटा न एउटा त फसिहाल्थ्यो कि बैंसले खरिएका मध्येबाट ।
थाहा पाउने न हो । एकपटक भोग्नु हो । त्यसपछि, एकपटक पाएको अनुपम आनन्द सम्भिmएर पनि त आनन्द मान्न सकिन्छ नि पछिसम्म । होस्, पीडा नै हुने भए पनि बरू, पीडा बाँचिरहन हुन्थ्यो । कमसेकम एउटा रहस्य त च्यातिन्थ्यो ।
कुन्नि के सोचेर हो, उसलाई एकाएक चोर्नी बन्न मन लाग्यो । तर, के गर्नु बनेर ? कसैको सुन्दरता चोर्न सकिँदैन । उसलाई ग्लानि भयो । मिल्ने भए त कमला, दुर्गा, लक्ष्मी उसका साथीहरुमध्ये कसैले एक-दुई दिनलाई आˆनो रुप पैंचो दिँदा हुन् । चोर्नी बन्नै पर्दैनथ्यो ।
एक्लै बोली-’बैंस त पाएँ, सुन्दरता पाइनँ । बरू बैंस नै नआएको भए हुने । बैंस कुरुपता सम्झाउन आउने रहेछ कुरुपहरुका लागि । सुन्दरता बोध गराउन आउने रहेछ सुन्दरीहरुका लागि । बैंस सबैले पाउने रहेछन् तर सुन्दरता सबैले पाउने रहेनछन् !’
नराम्री भएपछि प्रेमिका हुन गाह्रो, वेश्या हुन गाह्रो, बलात्कृत हुन गाह्रो, स्वास्नी हुन गाह्रो, जिन्दगी नै गाह्रो । आँखा चिम्लेर छटपटाउँदा उसलाई कसौंडीमा उम्लिरहेको पानीमा ढकनी लगाएजस्तो भयो । कामुक तन्द्राले उसलाई स्वप्निल बनायो ।
किन न्यानो भएको यो शरीर र यो मन ? उसले बुझ्न सकिन, तर न्यानो लागिरहृयो । त्यो न्यानोसँगै ऊ मस्त निदाई । सपनामा ऊ कुनै सुन्दर पुरूषको अँगालोमा बेरिएकी थिई । तर, जब ऊ बिहान आँखा खोल्छे त रातको जाडो छल्न एउटा कुकुर ऊसँग उसको ओछ्यानमा घुसि्रएको पो रहेछ ।
यसो कोल्टो फेर्दा देखी- उसको ओछ्याननजिकै घिनलाग्दी कुकुर्नीसँग एउटा मज्जाको कुकुर, यो सहरकै नायकजस्तो देखिने मस्तको, कामलीलामा कति खेरदेखि हो कुन्नि मस्त… !
(स्रोत : न्यौपानेको पुस्तक ‘पानीको घाम’बाट)
विधा : पुस्तक अंश | Amar Neupane, Upanyas Ansha. यस रचनालाई बूकमार्क गर्नुहोस् ।